Lumina na Draco: 2 Simple na Light Alternative Desktọpụ Gburugburu | Site na Linux
Lumina na Draco: 2 Simple and Light Alternative Desktop Environments
Linux Post Wụnye | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux
Abịa na Linux, enwere ọtụtụ ihe na - eme iche iche na - akpata oke agụụ na ịnụ ọkụ n’obi n’etiti ndị ọrụ Linux. Ihe ndị a na-agụnye ma Ebe Desktọpụ (DE) dị ka Nchịkọta Ohere (WM). Nke bụ ihe kpatara, site n'oge ruo n'oge, anyị na-ekwukarị ụfọdụ n'ime ha. Ma taa bụ uzo nke 2 ndị a: Lumina na Draco.
Okwesiri ighota, tupu ibanye n'ime ha nke oma, na Lumina na Draco nwa 2 Desktọpụ Desktọ dị mfe ma dịkwa fechaa (DE), nke mbụ e wuru kpamkpam site na ncha, na nke abụọ bụ ndụdụ nke mbụ.
Atọ n'Ime Otu na Moksha: Gburugburu Ebe Obibi Desktọ Ndị Ọzọ Na-atọ 2tọ
Ọzọkwa, ọ dị mma icheta maka ndị hụrụ ya n'anya Ebe Desktọpụ (DE), nke anyị gara aga DE kwuru bụ: Atọ n'Ime Otu na Moksha. Kedu nke a tụlere dị ka:
"Nweta (ndụdụ) ochie Desktọpụ Gburugburu nke emere ka ọ gaa n'ihu na-arụ ọrụ na ụfọdụ ma ọ bụ GNU / Linux Distros dị iche iche, ọkachasị iji nweta ikike ha zoro aka, na usoro iji nweta akụ na ụba (RAM, CPU)".
Ihe kpatara, mgbe ị mechara post a, anyị na-akwado ịgụ ihe ndị a yiri posts:
Ọnọdụ Desktọpụ Nke Ọzọ Anaghị akwado DEBIAN 10
Na ndị ọzọ metụtara: GNOME, KDE Plasma, XFCE, pawuda, MGBE, Lxde y NXT.
1 Lumina na Draco: Ebe Desktọpụ (DE)
1.1 Kedu ihe bụ Lumina DE?
1.2 Lumina DE Atụmatụ
1.3 Gịnị bụ Draco DE?
1.4 Atụmatụ Draco DE
Lumina na Draco: Ebe Desktọpụ (DE)
Kedu ihe bụ Lumina DE?
Dị ka Lumina DE gọọmentị webụsaịtị, nke ahu bu:
"Ebe Desktọpụ dị fechaa nke emere site na ala ruo obere akara, na-enye usoro gị arụmọrụ kacha mma. E wuru ya ka ọ na-aga n'enweghị nsogbu n'etiti ọrụ kọmputa, ebe ị na-enye ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ n'otu ngwugwu ntinye.".
Lumina DE Atụmatụ
Ndị mmepe ya na-ekwu na ọ pụtara ìhè na / ma ọ bụ dị iche na ndị ọzọ Ebe Desktọpụ (DE) por:
Hazie ka ịrụ ọrụ nke ọma na Distro ugbu a Ọnwụ y EziOSOS (Akwụsịrị), ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka BSD Community Distros, n'ozuzu ya. Agbanyeghị, Lumina DE nwekwara ike ibute ya na sistemụ arụmọrụ ọ bụla, gụnyere nkesa Linux.
Achọghị ka ejiri ihe eji arụ ọrụ desktọọpụ (DBUS, policykit, consolekit, systemd, HALD, na ndị ọzọ).
Etinyeghi ya na ngwucha “onye oji” (ihe nchọgharị weebụ, ndi ahia email, ngwanrọ na otutu media, ulo oru ndi ozo, wdg). Naanị ngwa ọrụ nke Lumina wetara na ndabara bụ ndị edere edepụtara maka ọrụ ahụ ma ọ bụ maka ọrụ arụmọrụ, ya bụ, ụdị ọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, nnukwu ọrụ bụ njikwa faili.
Nwee faịlụ nhazi ederede dị mfe iji tọọ ndabara usoro maka ndị ọrụ ọhụụ. Nke a na-enye ndị na-ere desktọọpụ ohere idozi interface / sistemụ dị mfe iji rụọ ọrụ maka onye ọrụ njedebe.
Nye ngwa nhazi nke dabere na plugins. Nke na-enye onye ọrụ ohere ime ka desktọọpụ dị ka ìhè / arọ dị ka ha chọrọ (n'ime ihe kpatara ya), naanị site na ịhọrọ ụdị plugins ga-agba na desktọọpụ / panel ha.
Ọrụ dị ka usoro ihe eji eme ihe n'ozuzu, ya bụ, nwee ike ịrụ ọrụ na ụdị / nha ngwaọrụ ma ọ bụ ihuenyo ọ bụla.
Maka ozi ndị ọzọ, gaa na njikọ ndị a: 1 njikọ, 2 njikọ y 3 njikọ.
Gịnị bụ Draco DE?
Dị ka Weebụsaịtị Draco DE, nke ahu bu:
"Mpaghara desktọọpụ dị mfe ma dịkwa fechaa. Ọ bụ ezie na pere mpe, ọ na - egosipụta njikọ XDG, nnwere onwe na nnwere onwe na nnabata, nchekwa na njikwa ike, desktọọpụ, dashboard, nkwado ọtụtụ nyocha, na ọtụtụ ndị ọzọ. Draco anaghị agụnye ngwa ọrụ ọ bụla. Emepụtara Draco na Slackware Linux, mana ọ dakọtara na RHEL / CentOS / Fedora na Linux ndị ọzọ. Draco bụ ndụdụ nke Lumina".
Atụmatụ Draco DE
N'adịghị ka Lumina DE, weebụsaịtị nke Draco DE enyeghi nkowa zuru oke banyere njirimara ya, ma cheta nke ahu Draco DE bụ a ndụdụ nke Lumina DEYa mere, ekwesighi inwe oke di iche. Agbanyeghị, anyị nwere ike wepụta ma gosipụta ihe ndị a:
Banyere njikwa nchekwa: Ọ bụ ike nke na-egosipụta dị nchekwa na ngwa anya ngwaọrụ ke usoro tree, na nke na-enye akpaka arịọnụ (na oghere) nke nchekwa / ngwa anya ngwaọrụ mgbe kwukwara, na akpaka CD / DVD playback.
Banyere njikwa ike: Ọ na-enwe ike imejuputa ọrụ ihuenyo ahụ org.freedesktop.screenSaver, ọrụ org.freedesktop.PowerManagement ma na-akpaghị aka na-enye ọnọdụ nke kwụsịtụrụ ịrahụ ụra.
Banyere nhazi ya, a na-ekewa ya n'ime ihe ndị a: libDraco, mmalite-draco, drako-ntọala, draco-settings-x11, org.dracolinux.Desktop, org.dracolinux.Power, org.dracolinux.Powerd, org.dracolinux.Storage, org.dracolinux.XDG na xdg-emeghe .
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" Na ndị a Gburugburu Desktọpụ ọhụrụ 2 (DE) debara aha na Blog, akpọ «Lumina y Draco», nke a na-ahụkarị na ọ dị mfe na ìhè, ma gosipụta na nke abụọ bụ ndụdụ nke mbụ; nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Lumina na Draco: 2 Simple and Light Alternative Desktop Environments
KDE Plasma 5.20 rutere na mmelite dị iche iche na ngwa ya na ndị ọzọ
A na-efunahụ agha, Epic egwuregwu na-achụrụ ndị ọrụ iOS ya